अब बुटवल, काठमाडौंलाई टक्कर दिन्छौ ं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / अब बुटवल, काठमाडौंलाई टक्कर दिन्छौ ं
अब बुटवल, काठमाडौंलाई टक्कर दिन्छौ ं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता April 4, 2018	0 180 Views
अध्यक्ष– देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ
प्रदे श ५ को मध्यबिन्दुमा पर्छ दाङको लमही नगरपालिका । यही नगरपालिकाभित्र पर्ने प्रमुख शहर लमहीलाई व्यवस् िथत बनाउने अभियान शुरु भएको छ । लमही नगरपालिका, नगर विकासलगायतका निकायहरुको समन्वयमा बजार व्यवस् िथत बनाउने अभियानको ने तृत्व दे उखुरी उद्यो ग वाणिज्य संघले गरिरहे को छ । नालाभन्दा बाहिर सडक क्षे त्रमा गरिने ब्यापार ब्यवसायलाई निरुत्साहित पार्दै अस् तब्यस् त बजारलाई ब्यवस् िथत बनाउन निश्चित ठाउ“मा ठे ला तथा फूटपाथ ब्यवसायको स् थान तो क्ने काम पनि भएको छ । लमही बजारलाई व्यवस् िथत गर्न थालिएको अभियानबारे युगबो धकर्मी दशरथ घिमिरे ले दे उखुरी उद्यो ग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रत्नप्रसाद श्रे ष्ठसग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको छ । – सम्पादक
बजार ब्यवस् िथत गर्ने अभियान लिएर तपाइ“हरु नै फिल्डमा नै उत्रनुभएको छ नि ?
कुरा गरे र, भाषण गरे र अब काम हुने समय छै न । म र मे रो टिम चुनावमा हो मिदा हामीले बाचा गरे का कुराहरु सम्झिरहे का छौ ं । त्यो बे लामा लमही बजारलाई ब्यवस् िथत गर्ने  । यहा“को ब्यापारलाई प्रबद्र्धन गर्ने प्रमुख यो जना थियो  । त्यही यो जनालाई सार्थक बनाउन उपभो क्ताहरुको आकर्षण बजारमा के न्द्रित गर्न अस् तब्यस् त रहे को बजारलाई व्यवस् िथत गर्न थाले का हौ ं । काम गरे र दे खाउन ने तृत्वकर्ताहरु नै फिल्डमा उत्रन जरुरी छ । म र मे रो टिम कार्यसमितिका साथीहरु, बजारबासीलगायत सरो कारवाला निकायका साथीहरु हामी स“गस“गै काममा खटिएका छौ ं । के हीलाई लाग्नसक्छ यो अभियान ठे ला मात्रै ब्यवस् थापन गर्ने अभियान हो कि ? त्यसो हो इन । हामी लमहीलाई सुन्दर, सफा र राम्रो नगर बनाउने दीर्घकालीन यो जनाका साथ अघि आएको हुनाले ठे ला व्यवसायीहरुलाई विस् थापन गरे का हो इनौ ं । बरु उहाहरुको उचित ब्यवस् थापनको लागि विकल्प खो जे र निश्चित ठाउमा राख्ने यो जना बनिसके को छ । तसर्थ यो अभियानलाई कुनै वर्ग लक्षित, कुनै समुदाय लक्षित अथवा कतै लक्षित हो इन । हामी लमही नगर बनाउने अभियानमा जुटे का छौ ं ।
लमहीलाई व्यवस् िथत गर्न सकिन्छ त ?
अवश्य सकिन्छ । वास्तवमा हामीले हाम्रो भूगो ललाई चिन्नुपर्छ । हामी कहा छौ ं ? हाम्रो ठाउको सम्भावना के कस् तो छ ? भने र एकपटक सो चौ ं । हाम्रो नगर प्रदे श ५ को मध्यबिन्दुमा छ । १२ वटा जिल्लाको से न्टर ठाउ“भने को लमही हो  । यो नगर ह“ुदै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग गुडे को छ । हाम्रो नगरमा बसो बास गर्ने हामी नागरिकहरुले चौ बिसै घण्टा सार्वजनिक यातायातको पहु“चमा छौ ं । यहा“को विकास भयो  । हाम्रो नगरमा प्रवे श गर्ने जो को हीले पनि नया“ अनुभूति गर्न सक्ने हामीले बनाउन जरुरी छ । त्यसको शुरुवात बजारबाट गर्न थाले का हौ ं । लामो समयसम्म स् थानीय तह जनप्रतिनिधिबिहीन अवस् थामा थिए । अहिले जनप्रतिनिधि आइसके पछि हाम्रो ठाउ“को विकासका लागि हामी सबै एकजुट भएर अघि बढ्ने संकल्प गरे र अघि बढे का छौ ं । यहा“को राम्रो कुरा र नराम्रो कुरा दे शभर प्रसार हुन्छ । हामी राम्रो कामको प्रसार गर्न चाहन्छौ ं । बजार ब्यवस् िथत गर्ने काम यस अघि पनि थालिएको थियो  । तर त्यो सफल हुन सके न । यसपालि हामी बजार सुधार गरे र यहा“ बजारमा आउने उपभो क्ता र ब्यवसायीको आनीबानीमा सुधार ल्याउने अठो टका साथ फिल्डमै छौ ं । बजार ब्यवस् िथत गर्ने काम एक्लै ले चाहे र सम्भव छै न । यसमा सबै को मन मिल्न जरुरी छ । हामी ब्यवसायी, उपभो क्तालगायतको मन मिलाउने गरी काममा खटिएका छौ ं । साथै बजार अस् तब्यस् त हु“दा दुर्घटना बढी हुने गरे को छ । यसअघि अव्यवस् िथत ठे लाको कारणले गर्दा ट्रकले मो टरसाइकललाई किचे को थियो  । त्यस क्रममा लमहीकै युवा सख्त घाइते बन्नुपरे को घटना हामीस“ग ताजै छ । त्यसै ले शुरुवात ठे लाबाट भएको हो  । तर हामी सबै क्षे त्रलाई ब्यवस् िथत गर्ने छौ ं । हामीले अभियान चाल्दै गर्दा अहिले लमही बजारमा ठे ला दे खिन छाडे का छन् । ठे लाहरुलाई वसपार्क र लमहीको कम्प्ले क्स भवन नजिक रहे को खुला ठाउ“मा ब्यवस् िथत गरे का छौ ं । अब बजारका अन्य अव्यवस् िथत संरचनालाई हटाइने छ । बजार व्यवस् िथत भयो भने बजार पनि अटो मे टिकरुपमा चलायमान हुन्छ । निश्चित ठाउ“मा व्यवसायलाई व्यवस् िथत गरियो भने बजारमा सरसफाइ हुन्छ । उपभो क्तालाई किनमे ल गर्न सहज हुन्छ । ब्यावसायिक सुरक्षा हुन्छ । उपभो क्तामै त्री ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । उपभो क्ताबिनाको ब्यापार हु“दै न । जहा“ सहज र गुणस् तरीय सामान पाइन्छ उपभो क्ताको रो जाइ त्यहीं पर्छ । बुटवल, काठमाण्डौ ं र ने पालगञ्जमा जुन बजार छ, त्यसलाई टक्कर दिने गरी हामीले यहा“ बजार विस् तार गर्नुपर्छ । त्यही अनुसारका सामानहरु यहा“ उपलब्ध भयो भने उपभो क्तालाई पनि सहज हुन्छ । ब्यवसाय पनि फस् टाउछ ।
तपाइ ने तृत्वमा आइसके पछिका महत्वपूर्ण कार्यहरु के –के हुन् ?
चुनावी अभियानमा रह“दा ब्यवसायीहरुस“ग गरिएका सुझाव संकलनमा अधिकांशले झो ले ब्यापारीहरुको कारणले गर्दा समस् या परे को गुनासो पो ख्नु भएको थियो  । राज्यलाई कर नतिर्ने , दर्ता प्रक्रियामा नआउने , अवै धरुपमा ब्यवसाय गर्ने हरु भने का झो ले ब्यवसायी हुन् । यिनलाई निरुत्साहित बनाउन हामीले निर्णय गरे र अघि बढ्यौ ं । झो ले ब्यवसायीहरुलाई सजग गराउ“दै प्रक्रिया पूरा गरे र ब्यवसाय गर्न भने पछि अहिले धे रै जसो त दे खिन छाडे का छन् । के हिले दर्ता गरे र व्यवसाय गरे को हामीले पाएका छौ ं । यो प्रमुख उपलब्धि हो  । अर्काे कुरा ब्यवसायीहरु दो हो रो करको मारमा परे का गुनासाहरु बढी आइसके पछि नगरपालिका र हामीबीचमा धे रै चरणमा छलफल भएका छन् । एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गर्दा करको दायरा फराकिलो पारिने र दो हो रो करको मारमा ब्यवसायी नपर्ने गरी अघि बढ्ने विषयमा नगरपालिकास“ग छलफल गरे का छौ ं । अको र् कुरा हामी आइसके पछि व्यवसायीहरुको पक्षमा वकालत गर्ने  र उहा“हरुको पक्षमा आवाजहरु उठाउने काम गरे का छौ ं । सरसफाइ अभियान लमहीमा चले को छ । यो अभियानमा हामी पनि स“गस“गै छौ ं । बजारलाई स् वच्छ सफा राख्न हामी पनि अघि सरे का छौ ं । नाला भन्दा बाहिर हुने ब्यापारलाई पूर्णरुपले निरुत्साहित बनाउने अभियानमा छौ ं । यसले गर्दा बजार क्षे त्रको सडक फराकिलो बन्ने छ ।
बजार व्यवस् िथत गर्ने अभियानमा समन्वयको पाटो कस्तो छ नि ?
सबै को बीचमा समन्वय र छलफल गरे र अघि बढे का छौ ं । सम्पूर्ण ब्यापारी नगरपालिका, नगर विकास र अन्य संघसंस् थाहरुलाई साथ लिएर अघि बढे का छौ ं । एक्लै गरे र के ही सम्भव छै न । जहा“ पनि सहकार्य गरे र अघि बढ्नु पर्छ । कसै मा पनि ब्यक्तिवादी सो च हावी हुनुह“ुदै न् । सामूहिक भावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ । सबै को भावना बुझे र अघि बढिरहे को छु । राम्रो कामको लागि राजनीतिकरण गर्नुभएन । सबै मिले र अघि बढ्दा त्यही नै महानता हुन्छ ।
लमहीको भविष्य कस्तो छ ?
वास् तवमा लमहीलाई हिरा बनाउन सकिन्छ । धे रै अवसर र सम्भानाहरु छन् । हामीस“ग के छै न ? सब चिज छ । अब सबै को सो च बदल्न जरुरी छ । परम्परागत सो चले अघि बढ्न
सकिदै न । नया“ टे क्नो लो जीलाई अवलम्बन गरे र स् वदे शी तथा विदे शीहरुको ध्यानाकर्षण यहा“ बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले के –के गर्नुपर्छ ? यसो मनन गरौ ं । को इलाबास नाका खुल्दै छ । यो नाकाले प्रदे श ५ कै समृद्धिमा इ“टा थप्ने काम गर्ने छ । लुम्बिनीजस्तै स् वर्गद्वारीको नामले हाम्रो ठाउ“को विकास गर्न सकिन्छ । पर्यटकीय गन्तब्य बनाउन सक्छौ ं । यसका साथै प्रदे शको ब्यापारिक के न्द्र बनाउन सक्ने प्रशस् त आधार छन् । रतननाथ बाबाको कसै ले पनि नाम लिएको सुनिदै न । रतननाथ बाबा मन्दिरको नामले हामी चिनिन सक्छौ ं । दे श विदे शका पर्यटकहरु भिœयाउन सक्छौ ं । रिहार बाबा धाम छ । जखे रा ताल छ । दे वीको ट छ । प्रशस् त आधार छन् । यिनको समुचित विकासको लागि राज्यले ध्यान दिनै पर्छ । राज्य र राजने ताहरुले हामीलाई नठगे को खण्डमा दे उखुरी क्षे त्र से न्टर पो इन्टमा पर्ने भएको हुनाले , सबै को चाहना दाङ दे उखुरी नै प्रादे शिक राजधानी हो  । सबै को मतलाई आधार मान्ने हो भने प्रादे शिक राजधानी हाम्रो ठाउ“मा हुन्छ । यसका लागि निस् वार्थ भावनाका साथ अघि बढ्नु पर्ने भएको छ ।
Previous: आर्थिक समृद्धिको जग बन्नुपर्छ सहकारी
Next: पैसा नभएर जनता आवास कार्यक्रम प्रभावित
महायज्ञ शैक्षिक सुधारको महाअभियान
माक्र्स र बुद्धलाई जोड्ने काम अधुरै छ
शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी कम छ